Warbixin: Gurmadka Dab Damiska
Dabkii Isniintii ka kacay suuqa ugu weyn magaalada Muqdishu ayaa soo bandhigay kartida hay’adda dab damiska ee gobolka Banaadir.
Dabkaasi waxa uu bilowday 3am waxaana uu soo laba kacleeyey laba jeer, taasina waxay muujinaysaa in weli awoodda hay’adda dab damiska ay liidato. Magaalada Muqdishu waxa ka hawlagala 5 baabuurta dab damiska ah, waxaana magaalada ku nool ku dhowaad laba milyan oo qof.
Laba ka mid ah shaqaalaha dab damiska ayaa ku dhaawacmay hawshii ay ku daminayeen suuqa Bakaaraha iyadoo mid ka mid ah uu liqay qiiq xaaladdiisa caafimaadna ay liidato, halka kan kale ay ku dhacday tuubo.
Shaqaalaha ay wada shaqeeyaan waxay sheegeen in dhaawaca soo gaadhay shaqaalaha dab damiska ay muujinayso in qalab aysan haysanin ka difaaca halista ay u badheedhayaan.
Adeegga dab damiska gobolka Banaadir waxaa aasasay Cabdullaahi Maxamed Cabdulle oo ku magac dheer Saney oo horey u ahaa ciyaarayahan heer qaran ah oo ordi jiray orodka 1,500 mitir. Waxa uu aasaasay sannadkii 2012-kii bishii Diisambar.
Xilligaasi Saney waxa uu yimid Muqdishu si uu gacan uga gaysto gurmadkii abaaraha hase yeeshee dhacdo ka dhacday habeen magaalada Muqdishu ayaa beddeshay hawshiisa kadib markii guri uu qabsaday dab isla markaana uu weydiiyey duqii hore magaalada Muqdishu ee xilligaas Maxamuud Axmed Tarsan inay magaaladu leedahay baabuurta dab damiska taasoo jawaabteedu noqotay ‘maya’.
Saney waxa uu kusoo laabtay magaalada Leicester ee UK halkaasi oo uu ku noolaa waxaana uu bilaabay inuu ururiyo dhaqaale lagu iibiyo qalabka gurmadka degdegga ah. Waxa uu ururiyey lacag dhan 40,000 oo ah giniga Biritan, waxaana ay ku iibiyeen laba baabuurta dab damiska ah iyo saddex ambalaas.
Waxa uu sidaas ku aasasay adeeggii dab damiska ee ugu horreeyey ee caasimaddu yeelato tan iyo sannadkii 1991-kii.
Horey waxaa adeegga dab damiska uga dhaawacmay saddex shaqaale ah. Mid ka mid ah shaqaalaha waxa uu ku dhaawacmay dab sannadkii 2016-ka kacay suuqa Madiina, halka mid kale uu ku dhaawacmay dabkii ka dhacay garaash ku yaalla lambar 4 sannadkii 2014-ka. Sidoo kale xubin kale oo ka mid ah shaqaalaha ayaa ku dhaawacmay weerarkii huteelka Ambassador lagu qaaday sannadkii hore.
Cabdisalaam Axmed Cabdullahi oo ka mid ah hawlwadeennada dab damiska ayaa sheegay in shaqalaaha uu dhaawucu soo gaadhay ay dhammaantood hawlgab yihiin isla markaana xaaladdooda caafimaad aysan u saamaxayn inay sii shaqeeyaan.
Cabdisalaam ayaa sheegay in shaqaaluhu haystaan tababar iyo khibrad ayna doonayaan inay naftooda huraan hase yeeshee waxa uu sheegay inaysan haysanin qalabkii daruuriga u ahaa badbaadada noloshooda.
Adeegga dab damiska waxa uu ka kooban yahay 75 shaqaalaha gurmadka ah iyo toddoba ah maamulka.
Saney waxa uu sheegay in shaqaalihii ugu horreyey lagu tababary magaalada Muqdishu halka goor dambe tababar dheeraad ah ay qaarkood kusoo qaateen magaalada Nayroobi.
Cabdisalaam waxa uu sheegay in shaqaalaha gurmadka dab damiska ay badbaadiyeen dad aad u badan muddadii afarta sano ee ay hawlgalka ku jireen haddii ay tahay meel dab ka gbanayo iyo xaaladaha kale ee degdegga ahba.
Saney waxa uu sheegay inuusan nasan doonin ilaa uu adeegga dab damiska ee Muqdishu uu ka dhigo adeeg casri ah.